Monthly top poems – The Art Garden Rohingya
Category: Monthly top poems
Editarór Fosón Rohingya Khavita5Wá | Julai Mac , 2021
Aug 12, 2021 AGR Monthly top poems
Editarór Fosón Rohingya Khavita5Wá Julai Mac , 2021 " Juwan Dilor Fosón Tui " Lé: Chit Phyu Fool kucbo tuwar toré Fool banailí mui besararé Jawan dilor fosón tui Fúlor holi baganor foori Mor cóppónor gulafi Jawan dilor fosón tui Dilor ...
Editors’ Choice Best5English Poems
Aug 11, 2021 AGR Monthly top poems
Editors’ Choice Best5English Poems July 2021 I Am Strong Alone By Ishrat Bibi I madeachoice to live my life It made me strong alone So strong alone on my way I feel released when I’m myself Some say ...
Editors’ Choice Top (5) English Poems
Jul 12, 2021 AGR Monthly top poems
Editors' Choice Top (5) English Poems June, 2021 Dream of Freedom I've been wide awake since I was born, Just to taste once freedom My actual vision is still on that. Despite being human, Evenadream can’t be fulfilled On contrary, surviving ...
Jul 11, 2021 AGR Monthly top poems
အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ် ဇွန်လ ၊ ၂၀၂၁ လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် - Austin Jani ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း မတရားအာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို အမြဲတော်လှန်နှိမ်နင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း NUG အစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေ NUG အစိုးရရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေကို စိတ်တူကိုယ်မျှ ထောက်ခံနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း စစ်ကောင်စီကို အင်တိုက်အားတိုက် မဆုတ်မနစ် တော်လှန်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း တရားမျှတမှုကို လိုလားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း လွတ်လပ်မှုကို ရှာဖွေနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို တောင်းဆိုနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း လူသား၏ တန်းတူခံစားခွင့် လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့် အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်တွေကို အမြဲဦးစားပေးတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း မတရားမှုကို တုန့်ပြန်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း တရားတဲ့နည်းလမ်းတွေကို လျှောက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း လူလူချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ရွံ့ရှာတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာကြီးကို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သာယာစေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံ့အရေး၊ တိုင်းပြည်အရေးကို ကိုယ့်တာဝန်ဟုခံယူတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ (17-06-2021) ...
Editarór fosón Rohingya Khavita (5) wá
Jul 10, 2021 AGR Monthly top poems
Editarór fosón Rohingya Khavita (5) wá " Rohingyá bólí eduun ká Fèrcani " - Múhammad Ayas Sayéd Ek hottó hái ar ek hottór hóbor nái Gorí bóllá ham ó nái Kemfót mazé forók ó becí Honó ham nofai rohingyá bolí Bólentíar ...
Mar 15, 2021 AGR Monthly top poems
Editarór fosón Rohingya Kavita (4) wá | Febuari, 2021. Arañg Sára Sóddári Lekóya- Kaladan Star No-zanós ekkán, úñrí bángos doccán. Baforó murát faillé hõi, goijjós fuwañjjá cíyallar lói. Cíyallar lesót dóri soli lí, izzot cohorot haraili. Rata kurá beec bak dilé, cíyallar matá tik ...
အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅)ပုဒ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊၂၀၂၁။
Mar 14, 2021 AGR Monthly top poems
အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅)ပုဒ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊၂၀၂၁။ ခံစားချက်ကဗျာ လေရူးသုန်သုန် ထွက်သွားစမ်းပါကွာ ငါမလိုချင်တော့ဘူး ငါ့ခံစားချက်တွေ ဖြေသိမ်းပေးတာ ငါမလိုချင်ဘူးကွာ ကဗျာတစ်ပုဒ်သီကျူးထားတဲ့ ဒီခံစားချက်တွေက ငါ့အတွက် နက်ရှိုင်းတဲ့ အမှတ်တရလို ငါသိမ်းဆည်းထားချင်တယ် သူတရားမျှတတယ်၊ မမျှဘူးဆိုတာ ငါမသုံးသပ်ချင်ဘူးကွာ သူ့ကြောင့်ရထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်က ရှေ့ဆက်မယ့် ငါ့ဘဝဖြေဆေးပါ အနည်းဆုံးတော့ ငါသေသွားတဲ့ချိန်ထိ ဒီဂါထာရွတ်ရင်း၊ အတိတ်ကကြယ်တွေရေရင်း နိဂုံးချုပ်ခွင့်ရချင်တယ်။ ရေးဖွဲ့သူ- ကိုအောင်လှ ပဟေဠိအဖြေ တွေးတောကြံဆ အဖြေရှာ အဖြေရဖို့ မချောသာ ခက်ခဲသည်ဟု စွန့်မထား ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြိုးစားရှာ။ အဖြေရဖို့ ဆန္ဒမှန် နောက်ပြန်မဆုတ် ရှေ့ဆက်တိုး ဆူးငြောင့်ခလုတ် တားဆီးကြို ကျော်လွှားဖြတ်ဖို့ သန္နိဋ္ဌာန်တိုး။ တယောက်အားနဲ့ မစွမ်းငှာ ညီညွတ်အားနဲ့အဖြေရှာ စုပေါင်းအင်အားစိတ်မှာထား အတ္တဇွဲများ ရှောင်ဖဲကာ ဘယ်ညာလက်ရုံး ညီတူသုံး နှလုံးလှနဲ့ ပန်းတိုင်ဘုံ။ ငါသည်ဆရာ သူကားတပည့် ငါသည်ကုံကြွယ် သူကားဆင်းရဲ ဆင့်တန်းမခြား သွေးမခြားဘဲ အလွှာပေါင်းစုံ စုပေါင်းညီ၍ ပဟေဠိအဖြေ နက်လွန်းကဲလဲ မကြာသော အနာဂတ်မှာ အောင်တံခွန်စိုက် ...
Editors’ Choice Top (5) English Poems| February 2021
Mar 13, 2021 AGR Monthly top poems
Editors' Choice Top (5) English Poems| February 2021 LIFE By Qurat Ul Ain Akhtar (From Multan) Life isanever ending maze Along the way are interventions you need to face Be firm as you take each road sealed off ...
လလလလလအယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ််၊ ဇန်နဝါရီလ။ (more…)
Jan 09, 2021 AGR Monthly top poems, Uncategorized
Editors’ Choice Top (5) English Poems | December , 2020 Nightmare By Ro ZHN My First Night On Island By D.M. Morwan The Land of Humanity By Swe Rohingya Sorry By Nur Sadek Pieces of You in ...
Dec 03, 2020 AGR Monthly top poems
Editaror fonsón Rohingya Kavya5wá Betailla Zindegi Le.- Roshidullah Kyaw Naing Añárar zindegi fúraizar cánti sará Añára óilam tórr sará tíkana hará Faní nái ek-fúça sugót handi bollá Himmót nái vukot ek-camic cõi bóllá E dukkór kaháni fúnító manúic nái... Buzaite ...
Editors’ Choice Top (5) English Poems, November 2020.
Editors' Choice Top (5) English Poems November 2020 My Perished Garden By Ro Anas My peaceful garden has turned faint. All birds of varied groups have vanished . Neither lovely sounds of flourishing trees, Nor withered leaves dropping I can heed. How ...
အယ်ဒီတာ အကြိုက် အကောင်းဆုံး ကဗျာ (၅)ပုဒ်၊နိုဝင်ဘာလ ၊၂၀၂၀။ ဒဏ္ဍာရီဆန် အာရ်ကာန် ရေးဖွဲ့သူ- Ro Anuwar Farook မိုးလင်းခါစ သူရကန်စက် ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ ရဲထွက်လာ၊ စကြာဝဠာကို လင်းရောင်ဖြာ ပြည်တစ်ခွင်လုံး ငြိမ့်သာယာ။ မြူးထူးပျော်ကာ တောချိုးငှက် သဲသဲပျံလွှား ဂနိုင်မှာ၊ တောင်ပြန်လေသံ တအိအိ ကြက်တွန်သံလည်း ငြိမ့်အတိ။ လန်းဆန်းပွင့်တဲ့ ရာသီပန်း ရှုခင်းဆန်းကြယ် ခါဟေမန်၊ သစ်ရွက်ကြွေပြောင်း အချိန်မှန် ဖူးသစ်ဆင်လာ ခါဂိမာန်။ လယ်ထွန်ဆင်းပွဲ ပျော်စရာ ကောက်စိုက်တေးညံ ဝသန်ပါ။ မှီဝဲတန်သည့် ဇာတိမြေ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေ အာရ်ကာန်ပြည်။ ရွေးကောက်ပွဲ အလွမ်း ရေးဖွဲ့သူ- အေနာမုလ်ဟာဆောင်း (ဘောလီမြေ) တောင်ပေါ်မြေပြန့် မြန်မာနှံ့သို့ ခြေဆန့်ကြည့်သော် လူမျိုးဖြည့်စုံ ထကြွအုံ၍ မဲရုံဆီသို့ သွားနေချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာများ ဝမ်းနည်းပက်လက် မျက်ရည်ဝဲ၏။ သမိုင်းအရိပ် ...
Oct 02, 2020 AGR Monthly top poems
Editoror Fosón Uttom Rohingya Khavita (5)wa. Septémbor |2020 Burá-búrir Hotá Lekoiya- Lalmoti Khan @ SFI Zettór Murá óibo óuk Four tole... Zettór Hál óibo óuk Nour tole... Zettór Manuíc óibi óuk Meçit tole... -Rohingya Old Poetry Burmese Translation ------------------------- တောင်ဘယ်လောက်ပင် ကြီးမြင့်သည်ဖြစ်စေ... ခြေဖဝါး အောက်တွင်သာ ဖြစ်ရတယ်။ မြစ်ဘယ်လောက်ပင် ကြီးကျယ်သည်ဖြစ်စေ... သင်္ဘောအောက်တွင်သာ ဖြစ်ရတယ်။ လူဘယ်လောက်ပင် အဆင့်အတန်းကြီးသည်ဖြစ်စေ... မြေအောက်တွင်သာ သွားရတယ်။ English ...
အယ်ဒီတာ အကြိုက် အကောင်းဆုံး မြန်မာ ကဗျာ ( ၅ )ပုဒ်
မြအယ်ဒီတာ အကြိုက် အကောင်းဆုံး ကဗျာ ( ၅ )ပုဒ် စက်တင်ဘာ ၊ ၂၀၂၀ တို့ဘဝ ရေးဖွဲ့သူ - မင်းဝန်ဇော် ၁။ မွေးတော့ တူတူ လူသားဟူ စာရင်းမ၀င် ဒီဇမ္ဗူ။ ၂။ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း ခေါ်သွားမူ ပစ်ဖယ်ခံရ တောင်းစားသူ။ ၃။ အရွယ်ရောက်လာ ကျောင်းသွားမူ ခွဲခြားဆက်ဆံ တမူထူး။ ၄။။ ဒုက္ခမျိုးစုံ ခံကာဆုံး ဆွတ်ခူးမှတ်ပေါင်း ဂုဏ်ထူးစုံ သို့ပါသော်လည်း မျိုးမစုံ နှိမ်ကာ ဖယ်ထုတ် ဂုဏ်ထူးပုဒ်။ ၅။ တရားရုံးအပါ ရုံးပေါင်းစုံဟာ တို့အတွက်တော့ အသပြာဖြုန်းရာ။ ၆။ ဖြုန်းတဲ့အသပြာ ရှာဆပ်ရုန်း ကျော့ကုန်းလောင်ကာ ဘ၀ဆုံး။ ၇။။ ငါတို့ဘ၀ နမူနာယူ ရာသီပျံလွှား ...
Oct 01, 2020 AGR Monthly top poems
Editors’ Choice Top5English Poems September 2020 I Carry You By Maroon Moon One word it takes to build me, One smile it takes to look deep into you, One stutter makes you come along to embrace me, One frown ...